कति छ बलिउड चर्चित नायिका दीपिकाको सम्पत्ती ? थाहा पाउनुहोस् | KTM Khabar
कति छ बलिउड चर्चित नायिका दीपिकाको सम्पत्ती ? थाहा पाउनुहोस्
२०७४ बैशाख २ गते १४:१० मा प्रकाशित
१ बैशाख । बलीउडको अहिलेकी चर्चित नायिका दीपिका पादुकोणको जन्म जनवरी ५ सन् १९८६ डेनमार्कमा भएको हो । डेनमार्कमा जन्मिएपनि बाल्यकाल भने बैगलोरमा बितेको थियो । बैगलोरबाटै स्कुले शिक्षा पुरा गरेकी उनले कलेज बने माउन्ट कार्मेल कलेजबाट गरेकी हुन् । ब्याडमिन्टनको राम्रो खेलाडी समेत रहेकी उनिले बलिउडमा प्रबेश गरे लगतै पढाइलाई निरन्तरता दिन सकिन्न ।
टेलिभिजनबाट आफ्नो अभिनय यात्रा सुरु गरेकी उनले लक्मी फेशन विक २००५ बाट आफ्नो मोडलिङ यात्रा प्रारम्भ गरेकी हुन् । मोडल अफ दि इयरको उपाधि जित्न सफल भएकी थिइन् । दीपिका पादुकोणका हजुरबुबा मिसोरी ब्याडमिन्टन एसोसियसनका सचिव रहेका थिए भने उनकी बहिनी अनिशा पादुकोणपनि गल्फकी सफल खेलाडी हुन् ।
एक फिल्मका लागि १० करोड पारिश्रमिक लिने उनले बाजिराव मस्तानी फिल्म पछि भने आफ्नो पारिश्रमिक बढाएर १५ करोड पुर्याएकी छन् । बलिउडमा धेरै पारिश्रमिक लिने नायिकाहरुको सुचिमा पहिलो स्थानमा रहेकी छिन् । ७.५ मिलियन डलर कुल सम्पति रहेको उनि बलिउडकी धनी नायिकामा पर्द्छिन् । २७७३ स्वायर फुटमा फैलिएको चार बेडरुम भएको अपार्टमेन्टमा बस्ने उनको अपार्टमेन्ट मुल्य झन्डै १६ करोड रहेको बताईएको हो ।
सेतो कलरको अउडी ए८